TopView - Ngwa maka nyocha na oke ala - Geofumadas
Disemba, 2017 GPS / Equipment, mbụ echiche, topografia
Kwa ụbọchị, anyị na-ahụ na mkpa anyị na-agbanwe ma na maka ihe dị iche iche a na-amanye anyị inweta PC dị iche iche PC, GPS, na Ọnụ Ọgụgụ, nke ọ bụla nwere usoro dị iche, na mkpa nke mmụta maka usoro ọ bụla, na nke anyị nwere data enweghị nkwekọrịta, ọ na-esikarị ike ịfefe data site n'otu usoro gaa na nke ọzọ.
TopView Ọ bụ System Universal maka iji rụọ ọrụ ọ bụla PC, ọ bụla PDA, GPS ọ bụla, ọ bụla Total ọdụ, nke ọ bụla Eke. Nke Pié de Obra mepụtara maka ndị ọkachamara na ụlọ ọrụ na-ahụ maka ụzọ dị iche iche e si eme ihe iji kwado ọrụ ubi dịka ọ dịtụbeghị. TopView na-eweta ihe ọmụma nke ihe karịrị afọ 30 ahụ karịa karịa 500 Sector Professionals.
TopViewPc bụ nsụgharị jikọtara na PC ọ bụla, Laptọọpụ, ma ọ bụ Tablet PC, na-atụ anya ịbụ usoro dị iche iche maka ihe niile.
- Otu Software maka usoro ọrụ niile.
- Otu Software maka Ọnụ Ọgụgụ Niile.
- Otu Software maka GPS niile.
- Otu Ịmụta Ihe Nile.
Menus Haziri na Mmasị
- Haziri ya n'ụzọ doro anya na nke a na-apụghị imetuta, ọ nwere nchịkọta nhọrọ dị mfe.
- All Modules nwere windo nke na-eji onye na-emekọrịta ihe n'ụzọ doro anya na nke na-enweghị mgbagwoju anya, na-arịọ data dị mkpa n'oge ọ bụla na-eduzi nke a na ọrụ ọ bụla.
Ịbubata na mbupụ data
- Nabatara ọtụtụ ihe PC nke a na-ejikarị eme ihe na Spain.
- Nwekọrịta iji melite ma gbanwee maka ụdị mbupụ na mbubata mbupụ nke mmemme ọhụrụ na nke ọhụrụ nke nwere ike ibili.
- Ịbubata na ntinye ngwa ngwa na-enweghị mmeghachite dị n'etiti.
- TopViewPc bụ ngwá ọrụ dị mma nke ọrụ a ọ bụ ezie na nsụgharị nke Ce, Pocket, na WorkAbout nwekwara otu Mbubata Mbupu na Mbupụ
- TopView na-enye ohere ịnweta na ilele ihe oyiyi BMP, TIF, JPG dịka yana nhazi nke otu ihe na ndekọ nke nhazi ahụ maka ọdịnihu.
- na-enye ohere loading na ị na-elele DXF, DWG ndabere mgbe BMP, TIF, BMP, ikwe management nke CAD n'ígwé na ojiji maka staking niile CAD akpọkwa.
- Na-enye ohere iji anya nke ihe oyiyi ndị a dị na nchịkọta na nkwụsị nke ndị nchịkwa nakwa na Stakeouts of Digital Models of Lands. Na nke ikpeazụ ahụ na-aghọ a oké mkpa bulite ihe oyiyi na-eduzi ọrụ na MDT dị ka mgbe nile dị ka nke a golf N'ezie ebe mgbe nile nke ala dịghị aka itinye Green na Hoyos.
- TopView na-ejikọta njikwa njikwa na-enye ohere ka Mepụta, Hichapụ, Tinye ọrụ / Deactivate, ma kpọọ Ugbu a Layer ebe data edere n'ọhịa. Ọ na-akwanyekwara ọkwa ndị sitere na Mbubata nke DXF. Mmechi nke n'ígwé na-enye ohere mmezigharị na usoro nhazi na njikwa data
- TopView jikọtara ụzọ ọhụrụ na nke dị iche iche na-egosi na ị nwere ike ịmepụta usoro zuru oke na usoro ahịa.
- Ihe abanyela aka abanye aka ma ọ bụ pịa na ihuenyo.
- Ihe ndị dị na Njikwa Ebubara ma ọ bụ Mee na mbụ.
- Isi ihe.
- Ihe Coplanares.
- Ihe e dere na ntụgharị ma ọ bụ ogologo oge.
- Ihe nke Axis na-ejikọta Osisi, Ogologo, na Ntughari.
- XYZ Na-emekọ Ihe Ntọala.
- Ntọala na Geographic Coordinates.
- Ngalaba Cajeadas.
- Ụdị Nkebi.
- CAD entities nke DXF / DWG.
- Inweta isi ihe na XYZ na Geographies.
- Na - achọ ndị nchịkọta (Tachymetric).
- Ogbugba mbughari.
- Nri ogologo oge.
- A nyochaa ihe ndị dị na ihe gbasara Axis.
Ngalaba Cajeadas. Akụkụ Nkọtara Profaịlụ site na Profaịlụ site na usoro PC ebe TopView na-ebubata data nke isi ihe nke profaịlụ ọ bụla nyere n'iwu site n'ịbawanye Pk na Ntugharị. Ngalaba ndị a na-ejikọta Slopes nke usoro Pc kọwapụtara dịka ebe a na-ekwu.
Ụdị Ụdị. kọwaa site tebụl TopView widths na ubu, Tables Banye + + Berm Hip akara, Superelevations table, table na Eccentricity Ọkara, Vector Isiokwu na Isiokwu Slope na Cunetas ngalaba. Enweghi oghere mbụ na ihe omume a na-enye anyị ohere ikpebi ma ọ bụrụ na anyị chọrọ ịhapụ Dismantle ma ọ bụ mkpuchi na Pk ọ bụla.
- ọ na-enye ohere ka eto ọ bụla n'ọnụ mgbe na-akọwa na nke ugbu a Nikely ngalaba na a recessed mgbe anya na elu ọbụna na-enye ohere retranqueo esonụ ọ bụla nke mkpọda n'akụkụ aka vertex họọrọ.
- Na-enye gị ohere ịchọtaghachi ihe ndị dị na Theoretical Points na ntanetakịrị na ihe ọ bụla Vector nke ngalaba, dị ka oghere.
- Na-enye gị ohere idekọ ihe staked maka isi maka Control Quality ma ọ bụ maka mgbanwe.
- Na - ejikọta nkọwa nhazi ahụ na ihe ọhụụ. All ọcha ma parametric na vector na-interpolated linearly, ikwe management mkpọda na-eji nwayọọ nwayọọ mkpọda mgbanwe (Tali na Abanico), mgbanwe roadsides na "V" ka okporo mmiri "U", berms na-egosi ma na-apụ n'anya, berms nke na-aga na ala site na mkpọda, wdg.
- Na-enye ohere maka ihe okike nke vectors nke na-akọwa steely, na-adọba ụgbọala, jumps na oke nke guzosiri ike na ihe ndị a, na ihe ọ bụla ọnụ ọgụgụ, Otú ọ dị obere ọ nwere ike iyi.
- Jikọọ okpokoro okpokoro isi na axis, na-ekwe ka otu ụdị nke a ga-etinye n'ọrụ dị iche iche Axes.
- Dị ka Nkebi cajeadas ọ na-ekwe ka idekọ ihe rethought na a file Transversal ka na a otu ngafe nwere ike ime ka isi, ụkwụ, Axis, ma na-Transversal Land Real.
Ụdị Ụdị (MDT)
- Stakeout kpamkpam eserese na-egosipụta Triangle anyị bụ na mmụba nke Cota na nke a.
- Na-enye gị ohere ịchekwa isi ihe ndị ọzọ a na-atụgharị site na itinye ha akara na-akpaghị aka na-egosi na triangle nke ọ dị na njehie na elu.
- Ọ na-enye ohere ka Rethink Nodes dị ka ọ bụrụ na ọ bụ isi ihe.
- Na-enye gị ohere ijikwa TIF / JPG / BMP / DXF / DWG ndabere ihe oyiyi maka nsonaazụ dị mma.
- Ngwunye nke zuru ezu: Na-enye ohere iji Flat na UTM Projection System. N'ihe banyere UTM, usoro ihe omume ahụ na-emepụta ọnụọgụ kọorphosis kwesịrị ekwesị maka ịgụ ọ bụla.
- GPS: Ọ na-enye ohere Ijiri Datums, na Ngalaba Nchịkọta Kọmitii (SCL), ma ọ bụ ma n'otu oge ahụ. SCL na-agbakwụnye n'ụzọ dị iche iche mgbanwe na XY na ngbanwe na Z maka ngbanwe dị mma nye Real Land. Iji SCL agụnye a na ịba uru (ex ante akara) na-enyere aka nyochaa izi ezi nke data (obodo achịkọta aka banyere erroneously, Obodo achịkọta weere na ubi-ezighị ezi ihe, dị iche usoro nke bụ obodo na-achịkọta "Utm ma ọ bụ Flat ").
Ntugharị site na Mobile (Nhazi Ọhụrụ).
- Ọ na-enye ohere ka ịtọ ntọala GPS n'ebe ọ bụla.
- Na - ewepu mkpa maka ndị ọrụ maka nyocha onyunyo.
- Belata isi ala site n'inweta na nke ziri ezi na uru nke RadioModem.
- N'ime ogologo oge Polygonal na GPS, ọ na-enye ohere ịgbanwe Sensọ Isi na n 'ebe dị anya na-enweghị mbenata nkwụsị isi.
- Na Ọrụ ebe enwere ebe isi ihe dị na GPS na-enye gị ohere iji nke a, ọ bụ ezie na nchịkọta obodo ya abụghị otu nke anyị, na-enwe ike ịchọta isi GPS anyị na Mobile ma nwee sensọ abụọ iji rụọ ọrụ ahụ.
- TopView-enye ohere niile modul staking oghe a faịlụ na ihe odide nke ihe n'ezie akara ubi na-dere na n'ezie elu nke teren automating n'ókè koodu dere egbukepụ aha faịlụ na bịara na-ahazi ka reframe ya mgbe nọmba, na njehie achọpụtara site staking ya. Na ihe niile a na-otu nzọụkwụ.
- Usoro a bụ ngwá ọrụ kacha mma maka Ọdịdị Ọdịdị ọ bụla nke na-agbakwụnye ọsọ, akpaaka, na arụmọrụ.
Ezubere usoro a iji rụọ ọrụ na ọdụ ọ bụla na GPS ọ bụla na RTK ma ọ bụ Ọnọdụ Static maka nhazi, n'ụzọ dị na naanị site n'ịgbanwe eriri na-ejikọ PDA na ngwaọrụ ejiri, anyị nwere ike ịga n'ihu na-arụ ọrụ site na iji otu faịlụ data . Ya mere, anyị nwere ike ịmalite ọrụ na GPS ma mesịa were isi ihe ndị na-enweghị ike iwere ya, n'ihi ịnọ nso ụlọ ma ọ bụ maka ihe ọzọ, yana Ọnụ Ọgụgụ naanị site n'ịgbanwe eriri na ịhọrọ ngwaọrụ ahụ.
Okwesiri ighota na emeputara ya dika ihe ntanye na mmemme a na-ejikarị na Spain maka PC dika Autocad, Clip, Mdt, Istram na Ispol, Cartomap, Protopo na ndi ozo, inwe ike isi na ha webata ha Atụmatụ na Elu Elu, ndepụta nke ala , ndepụta nke ndị na-ahụ maka ngalaba, ndepụta nke ngalaba ndị nwere akpa, na mbupụ isi, Nchịkọta, Cross Profaili, Profaili Longitudinal, wdg.
Bụ usoro ihe omume mepụtara na Spain, mmemme ahụ dum, akwụkwọ ntuziaka na mmemme nkwado maka PC, wdg ... edere na Spanish ma gbanwee ya na Hartware na Software dị na Spain.
Ntughari nke mmemme a na ụdị nke mbubata ma ọ bụ mbupụ faịlụ ga-aga n'oge kachasị dị mkpirikpi.
Previous Post«Previous Debe Bing Bing dị ka map ndabere na Microstation
Next Post Ala a abụghị ire ereNext »
Otu azịza na "TopView - Ngwa maka nyocha na oke ala"
Njikwa kwuru, sị:
NUM ამ ნომერზე 599106115